Uchwepheshe we-Semalt: Izinkinga zokuphepha ze-WordPress Wonke umuntu kufanele azi
Imikhuba eminingi yokuhweba neyesikhungo iya ku-intanethi. Ngenxa yalokho, i-intanethiinsimu iba yiklomelo engcono kakhulu yezigebengu zomshuwalense ukwenza ukuhlaselwa kwabo. Abaningi osomabhizinisi kanye nomnikazi we-website ye-e-commerce akwenziunolwazi olwanele namakhono wokwakha nokusingatha amawebhusayithi abo. Ngenxa yalokho, bakhetha izindlela ezifana namathuluzi e-DIY namapulatifomu wokubambanjenge-HostGator. Iningi lezinhlelo zokuphatha okuqukethwe, ezithembele kuzo zihlanganisa i-platform ye-WordPress. I-WordPress ibamba kuze kube ngu-24% wabo bonkeamawebhusayithi emhlabeni jikelele. Lesi simo sisho ukuthi abaduni banomkhakha omkhulu wokudlala ukuhlangabezana nabaphikisi babo. Ukuthola uhlelo lokufaka ama-Hackngokuvamile iphupho.
uFrank Abagnale, iMenenja yokuPhumelela kweKhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, inikeza izizathu zokuthi kungani abantu bekhetha i-WordPress. Okokuqala, bane-platform yomthombo ovulekile kanye nama-plugin amaningi, okuyintoangenza imisebenzi emikhulu. Ngenxa yalokho, i-WordPress iyisistimu yokuphathwa kokuqukethwe okujwayelekile, eyenza abantu bakwazi ukubamba amawebhusayithi amaningi.Noma kunjalo, i-WordPress inesidingo. Njengoba kunabantu abaningi abakha amawebhusayithi ku-WordPress, iningi lenhloso ye-hackerAmasayithi we-WordPress nawo. Isibonelo, uma umqaphi ethola umgodi ohlelweni lokuphepha lwe-WordPress, noma ku-plugin etholakalayo ye-WordPress,bangakwazi ngokushesha ukwenza inombolo enkulu yokuhlaselwa, okungathumela ulwazi lomsebenzisi noma olunye ulwazi olubalulekile ezindaweni eziyimfihlo.
Ukuvikeleka kusuka kugaxekile
Abagaxekile ngabantu abazama ukuhlambalaza izisulu ekufezeni imisebenzi ethile,kodwa inhloso ngemuva kokucasha ayilungile. Isibonelo, abanye abakwa-spammers bangase bazame ukukhohlisa abantu ekuchofozeni izixhumanisi ezithathelwanayo. Ngenyeizikhathi, bangase babe namakhasi okuphanga, abanika idatha eminingi ebalulekile. Ezikhathini zanamuhla, abakwa-spammers basebenzisa okunamathiselwe, okuqukethei-malware njengeTrojans. Kufanele uvuselele amaklayenti akho ngokumelene nalezi zinhlobo zokuhlaselwa. Abahlaseli bahlasele konke ukuhlaselwa kogaxekile. Kungenzekabadinga iziqinisekiso zomsebenzisi, ulwazi lwekhadi lesikweletu, ukulawula iwebhusayithi noma ezinye izisusa ezingcolile ngemuva kokuhlaselwa kwabo. Ukusebenzisa izinyathelo zokuphephangoba isayithi lakho lingalondoloza ngokuhlasela okuningi.
Abahlaseli bomuntu, ama-bots, nama-botnets
Uma ukuvimbela ukuhlaselwa kokuhlaselwa, kubalulekile ukuthola ukuthi ubani noma yiningemuva kokuhlaselwa. Abahlaseli abantu bangabantu bangempela abenza imisebenzi ngomgomo wabo engqondweni. Amabhukwana isofthiwe elula njengamarobhothi,okumelela umuntu ekwenzeni umsebenzi. Ngakolunye uhlangothi, i-botnet inethiwekhi yamabhu amaningi, njengezigidi, ezingathunyelwaukushaya izinyathelo ezihlukahlukene futhi unikeze imiphumela ku-hacker endaweni ethile.
Ukuphepha kwewebhusayithi yakho kanye nokwamakhasimende akho kuncikekakhulu kuwe njengomphathi. Lapho sakha amawebusayithi, sisaziboni ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi i-cyber-crime, engenza yonke indawo ye-e-commerce ibe yinto ehlukumezayophansi. Imizamo eminingi ye-SEO ilahleka ezandleni zabaduni abasiza abancintisana ngokuletha ukuncintisana okungalungile. Isimo siba sibi nakakhulunamawebhusayithi e-WordPress, ikakhulu ngoba amasistimu abo okuphepha ayaziwa kubo. Ngaphezu kwalokho, i-WordPress inezinombolo eziphezulu kakhulu kumasayithi. Abanyeamasu, okungazivikela ku-WordPress akulesi siqondiso. Ungaqinisekisa nokuphepha kwe-traffic yakho, izivakashi kanyenjengokuthuthukisa i-SEO ku-Google ngokuhlola okuvikelekile.